အမ်အက်စ်-ဒေါ့စ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(MS-DOS မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
MS-DOS (/ˌɛmɛsˈdɒs/ (Microsoft Disk Operating System) သည် ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈ဝခုနှစ်များအတွင်း ထွက်ရှိခဲ့သော စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Intel 8086 မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ (Microprocessor) များကို အခြေခံသောစနစ်ဖြစ်ပြီး IBM PC နှင့် မျိုးတူ PC များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Microsoft မှ ရောင်းချခဲ့သည်။ Microsoft သည် MS-DOS ကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအမြောက်အများ ရရှိခဲ့ပြီး သာမန် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဘာသာစကား ထုတ်လုပ်သည့် company အဖြစ်မှ software အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သော company အဖြစ် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
Cosed source; source-available for select versions since 2014
ဩဂုတ် ၁၉၈၁; ၃၉ နှစ် အကြာက (၁၉၈၁-၀၈)
8.0 / စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၀; ၂၀ နှစ် အကြာက (၂၀၀၀-၀၉-16)
↑ Paterson၊ Tim။ An Inside Look at MS-DOS။ Seattle Computer Products။6May 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Microsoft DOS V1.1 and V2.0: /msdos/v11source/MSDOS.ASM။ Computer History Museum, Microsoft (2013-12-19)။ 2014-03-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (NB. While the publishers claim this would be MS-DOS 1.1 and 2.0, it actually is SCP MS-DOS 1.25 andamixture of Altos MS-DOS 2.11 and TeleVideo PC DOS 2.11.)
↑ ၃.၀ ၃.၁ Shustek၊ Len (2014-03-24)။ Microsoft MS-DOS early source code။ 2014-03-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (NB. While the author claims this would be MS-DOS 1.1 and 2.0, it actually is SCP MS-DOS 1.25 andamixture of Altos MS-DOS 2.11 and TeleVideo PC DOS 2.11.)
↑ ၄.၀ ၄.၁ Levin၊ Roy (2014-03-25)။ Microsoft makes source code for MS-DOS and Word for Windows available to public။ Official Microsoft Blog။ 2014-03-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ (NB. While the author claims this would be MS-DOS 1.1 and 2.0, it actually is SCP MS-DOS 1.25 andamixture of Altos MS-DOS 2.11 and TeleVideo PC DOS 2.11.)
↑ MS-DOS: A Brief Introduction။ The Linux Information Project။ 24 December 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Obsolete Products Life-Cycle Policy။ Microsoft (July 30, 2009)။6April 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Phipps၊ Simon။ "Psych! Microsoft didn't really open-source MS-DOS"၊ InfoWorld၊ 2014-03-26။ 2014-03-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်အက်စ်-ဒေါ့စ်&oldid=627124" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။